HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH ISNIIN 10-KA JUUN 2019-KA
Monday June 10, 2019 - 09:46:33 in Wararka by Mogadishu Times
GUDOOMIYIHII GOBOLKA MUDUG OO XILKA LAGA QAADAY & MID CUSUB OO LA MAGACAABAY Wareegto kasoo baxday Xafiiska Mad axweynaha Dowlad Goboleedka Galmu dug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa wa xaa uu xilkii ka qaa day Guddoomiy ihii Gobolka Mudug, isa ga
GUDOOMIYIHII GOBOLKA MUDUG OO XILKA LAGA QAADAY & MID CUSUB OO LA MAGACAABAY Wareegto kasoo baxday Xafiiska Mad axweynaha Dowlad Goboleedka Galmu dug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa wa xaa uu xilkii ka qaa day Guddoomiy ihii Gobolka Mudug, isa ga oo Gobolkaas u Magacaabay guddoo miye Cusub. Wareegtada ayaa lagu sheegay in xilkii laga qaaday Gudo omiyihii Gobolka Mud ug ee Maamulka Galmudug Cabdi Rashiid Xaashi Cartan, waxana Gobolka Mudug guddoomiye loogu Magacaabay Cabdir axmaan Cali Diiriye ( Isxal).
Wareegada laguma xusin waxa saba bay in xilka qaadis lagu sameeyo Guddo omiyihii Gobolka Mudug ee Maamulka Galmudug, iyada oo weli uusan ka hadlin gudoomiyihii xilka laga qaaday.
DAGAAL DHEXMARAY CIIDAMADA AMISOM IYO ALSHABAAB
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal geystay khasaaro isugu jira dhi masho iyo dhaawac oo duleedka degma da Jalalaqsi ee Go olka Hiiraan ku dhexm aray Ciidamada Jabuuti oo ka mid ah AMISOM iyo AlShabaab.
Dagaalka ayaa yimid ka dib markii Xu bno ka tirsan AlShabaab ay weerar jidgal ah ku qaadeen Kolonyo ay la socdeen Cii damada Jab uuti oo marayay duleedka de gmadaas,,waxaana la sheegay in halka asi uu ka dhacay dagaal socday in ka badan 30 Daqiiqo,sida ay sheeg een Goobjoogay aal.
Waxaa jira khasaaro kala duwan oo la bada dhinac ah oo daga alkaas ka dha shay,waxaana wararku sheegayaan in Lix askari oo ka tirsan Ciidamada Jabuuti ay ku dhaawacmeen,hayeeshee AlShabaab ayaa waxaa ay sheegteen in weerarkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen 13 Askari oo ka tirsan Ciidamada Jabuuti.
Saraakiisha Ciidamada Jabuuti ee howlgalka AMISOM weli dhankooda kama hadlin dagaalka duleedka degmada Jala lqsi ay kula galeen Xubno ka tirsan Ururka AlShabaab,waxaana wararku sheegay aan in Ciidamada Jabuuti ay socdaalkoo dii sii wateen.
Wararka saakay laga helayo degm ada Jalalaqsi iyo deegaanada hoostaga ayaa waxaa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid deg an,isla markaana degma daasi ay ku sugan yihiin Ciidamada Dowl adda iyo kuwa Jabuuti.
DUQA MUQDISHO OO DHAGAXDHIGAY DHISMAHA WADDO MUHIIM AH
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ah na duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdi raxmaan Cumar Cusmaan (Eng: Yariisoow) Ayaa daahfuray mashruuc la gu dhisayo wadda laami ah oo isku xirta isgooska Siinaay iyo isgooska BaarAya an ee degmoo yinka Warta Nabada iyo Yaaqshiid.
Furitaanka mashruucan waxaa goob joog ka ahaa guddoomiye kuxigeenka ar imaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Jakeeti iyo guddoomiyaasha deg moo yinka Warta Nabada, Yaaqshiid iyo Boondheere iyadoo dhismaha laamiga ah ee wadadani ay qeyb ka tahay barnaam ijka Isxilqaan oo uu horey u iclaamiyay Ma daxweynaha Jamhuuriyada Feder aalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdul laahi Maxamed (Farmaajo)
Kusimaha Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Cabdifitaax Axmed Cali ayaa ka mahad celiyay daahfurka mashruucani.
Guddoomiyaha degmada Warta Nabada Seynab Maxamuud Warsame (Xaabsey) waxa ay sheegtay in dhisamaha wadadani ay tahay mid si isxilqaan ah lagu dhisido ono.Guudoomiye kuxigeenka arimaha bulshada iyo wacyi galin Maamulka Gobol ka Banaadir Marwo Basma Caamir (Jak kti)ayaa kula dardaarantay bulshada gob olka Banaadir in ay kaalin ka qaatan horumarinta Caasimada
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabd iraxmaan Cumar Cusmaan (Eng: Yariiso ow) waxa uu tilmaamay in wadadani ay no qon doonto midii sideedaad (8) oo uu maa mulkiisa dib u dhis ku sameen doono ismarkaana ay qeyb ka tahay qorshaha horumarinta Caasimadda si magaalada ay ula mid noqoto magaalooyinka dhigeeda ah.
RA’IISUL WASAARE KHEYRE OO MAGACAAB IS SAMEEYAY
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Fed eraalka Soomaaliya (XFS) mudane Xasan Cali Khayre, ayaa Shalay mag acaabay gu ddiga qaban qaabada xuska sannad guur ada 59aad ee maalmaha xorriyadda Soomaaliya ee 26ka June iyo 1da July.
1.Maxamed Cabdi Xayir Maareeye Wasiir ka WarfaafintaGuddoomiye
2.C/Raxmaan Ducaale BayleWasiirka Ma aliyadda Xubin
3.Xasan Cali Maxamed Wasiirka gaa shaandhiggaXubin
4.Maxamed Abuukar Islaaw Wasiirka Amniga Gudaha Xubin
5.Khadiija Maxamed Diiriye Wasiirka Dhallinyarada & Ciyaaraha Xubin
6.Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf Sadiiq Xirsi Warfaa Xubin
7.Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Guddo omiyaha Gobalka Banaadir Xubin
8.Bashiir Axmed Cusmaan Agaasimaha golaha Wasiirrada iyo Xariirka Baarlama anka Xubin
Guddiga ayey shaqadoodu tahay in ay qabanqaabiyaan xuska maalmaha xorriy adda ee 26ka Juun iyo 1da July, in ay si siman u xiriiriyaan hay’adaha shaqada ku leh maalmaha xorriyadda iyo midnimada, in ay jaan gooyaan qa rashaadka ku baxa ya xuska, in ay magacaabaan guddi hoo saadyada farsamo ee xuska iyo in ay kor meeraan ha nnaanka ay u socdaan howl aha guddi hoosaadka farsamo ee abaabul ka munaasabadaha Qaran.
RA’IISUL WASAARE KHAYRE OO LA KULMAY RICHARD MOORE
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Fe deraalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa Shalay xafiiskiisa ku qaab ilay agaasimaha guud ee siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda Boqor tooy ada Ingiriiska, Richard Moore.
Ra’iisul Wasaaraha iyo Richard Moore ay aa kulankooda uga hadlay xoojinta xari irka soo jireenka ah ee labada dowladood iyo taageerada Ingiriisku dowladda ka siiyo taba barrada ciidanka iyo qorshaha ciidanka Soomaaliyed ay kula wareegaya an amniga dalka.
Boqortooyada Ingiriiska ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya ka teegeerta tababarrada ciidanka, dhismaha xarumaha tababarrada iyo qorshaha fog ee ciimadama amniga Soomaaliya ay ciidanka AMISOM ugala waree gayaan mas’uuliyadda amniga guud ee dalka.
WASIIRKA WAXBARASHADA OO LA KULMAY WAKIILKA UNICEF EE SOOMAALIYA
Wasiirka Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaal ka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goo dax Barre ayaa kulan la qaatay magaal ada muqdisho Wakiilka Hay’adda Unicef ee Soomaaliya Mr. Werner Schultink.
Kulanka ayaa waxaa goob joog ka ah aa Agaasimaha Guud ee wasaaradda wa xbara shada iyo xubno ka tirsan Wasaara dda waxana looga hadlay kulanka xoojinta mashariic da horumarineed ee hay’adda UNICEF ka fuliso Soomaaliya gaar ahaan dhanka waxbarashada.
"Shalay waxaan magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Wakiilka Hay’adda Unicef ee Soomaaliya Mr. Werner Schu ltink.
Arrimaha ka wada hadalnay waxaa ka mid ah mashariicda horumarineed ee hay ’adda UNICEF ka fuliso Soomaaliya gaar ahaan dhanka waxbarashada.
Wasiirka waxbarashadda Xukuumad da Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goo dax Barre ayaa xubnaha ka socday hay ’adda UNICEF uga mahad celiyay tagee rada ay siiyaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhanka waxbarashadda.
RA’IISUL WASAARE KHAYRE OO KULAN LA QAATAY GOLAHA DHAQAALAHA QARANKA
R/Wasaaraha (XFS) Md. Xasan Cali Khay re, ayaa Golaha Dhaqaalaha Qaranka la qaatay kulan looga hadlay dardar gelinta qorsha dayn cafinta, istaraatiijiyadda maal gashiga dalka, kobcinta dhaqaalaha, kor dhinta dakhliga dawladda iyo iskaashiga dhaqaale ee gobalka geeska Afrika.
Golaha dhaqaalaha qaranaka oo ade egsanaya cilmi baaris dheer iyo cadaymo ayaa dawladda kala taliya arrimaha dhaq aalaha dalka, iyaga oo sidoo kale dawl adda talo ka siiya diyaarinta iyo dhaqangalinta siyaasad dhaqaale oo tayo leh taas oo ka caawinaysa iskudubaridka kha yraadka dalka iyo dibadda iyo fulinta qor shayaasha dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka.
Madaxwaynaha Jamhuuriyadd Fede raalka Soomaaliya, Maxamed Cabdull aahi Maxamed Farmaajo ayaa Dekareeto ku magacaabay golaha dhaqaalaha qaranka July 12, 2018, waxaana si rasmi ah loo daahfuray August 11, 2018.
DOORASHO MADAXWEYNENIMO OO KA SOCOTA DALKA KAZAKHSTAN
Dadka waddanka Kazakhstan ayaa Shalay markii ugu horreysya muddo 30 sa na ah soo dooranaya madaxweyne, ka dib markii uu dhawaan is casilay hogaa miyihii hore ee dalkaasi Nursultan Nazarbayev.
Dadka ka faallooda siyaasadda dalkaasi dhaca bartamaha Asia, ayaa sheegaya in doorshada Axadda Shalay ah dhaceysa uu ugu cad cadyahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee hadda talada haya Kas symJomart Tokayev.
Tokayev oo ah 66 jir ayaa taageero xo ogan ka heysta madaxweynihi hore Nurs ultan Nazarbayev.
Nazarbayev oo ah 78 jir ayaa xilka ma daxtinimada Kazakhstan hayay tan iyo xil ligii Midowgii Soofiyeeti. Is casilaadidiisii uu xilka kaga tagey bishii March ee san nadkaan ayaa aad uga yaabisay shacab ka waddankaasi, hase yeeshee wali wax aa la filayaa inuu si dadban u xakumi doo no haddii doorashada Shalay uu ku guul eysto KassymJomart Tokayev.
Dalka Kazakhstan ayaa ah dal hodon ku ah saliidda. Waan waddanka ugu baax adda weyn dalalka Islaamka, waxaana ku nool 18 milyan oo ruux.
FAAHFAAHIN SHIL KHASAARE GEYSTAY OO KA DHACAY MUQDISHO
Hal ruux ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay ka dib markii gaariga nooca Hoo meyda So omaalidu u taqaano uu dulmaray Mooto Bajaaj Xaafadda Warshadda Caanaha ee degmada Hodan ee Magaalada Muqd isho.
Qofka dhintay ayaa ahaa Wadihii Moo tada waxaana sidoo kale dhaawacmay hal ruux oo Saarnaa Mootadda sidda ay Ris aala u xaqiijiyeen dadka degaanka.
Ciidanka booliska ayaa soo gaaray goobta uu shilku ka dhacay, waxaana ay halkaasi ka qaadeen dhaawaca iyo mey dka dadkii ay waxyeelado kasoo gaartay Shilkaasi.
Gaariga ayaa la sheegay in uu ku so cday si xowli ah, islamarkaana uu hal mar ka soo dul dhacay Mootadda, waxaana xusid mudan in goobta uu shil ku dhacay tahay meel burbursan oo gaadiidku ay ku maraan si dhib ah.
MADAXWEYNEYAASHA MASAR IYO ERITREA OO KA WADA HADLAY XAALADDA SOOMAALIYA
Madaxweynaha dalka Masar, ahna Gud doomiyaha sannadkan ee Ururka Mid owga Afrika, C/fataax Alsisi waxa uu Qas riga Alitixaad ee magaalladda Qaahira kula kulmay dhigiisa dalka Eritrea, Issi yas Efewerki oo booqasho 2 maalmood ah ku jooga dalkaasi.
Wargeyka Alahram ee ku hadla Afka dowladda Masar ayaa qoray inay Labada Madaxweynee ka wada hadleen xiriirka iyo Danaha ay wadaagaan Masar iyo Eritrea, dhowrista Sharafta Muwaadini niinta labada Waddan.
Labada Hoggaamiye waxay kaloo ka wada xaajoodeen guud ahaan Xaalladaha Guud ee Qaaradda Afrika, xilli uu Madax weynaha Masar madax ka yahay Ururka Midowga Afrika.
Labada Hoggaamiye waxay kaloo isla eegeen Xaalladda Siyaasadeed ee dalka Suudaan, Mandiq adda Geeska Afrika, Arri maha Somalia, Ammaanka Webiga Niil, Badda Cas, waaxayna hoosta ka xarii qeen inay taageersan yihiin Hawlaha lagu sugay
Hillary Rodham Clinton oo mar soo noqotay Marwadii 1aad ee hore eeMadaxweynihii hore ee Maraykanka, Bill Clinton ,Xoghayihii Arrimaha dibedda ee dalkaasi iyo murashax Madaxweyne ayaa sheegtay inuu geeriyooday walaalkeeda ka yaraa oo la oran jirey Tony Rodham.
Qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitt erka ayey ku sheegtay inuu walaalkeeda geeriyooday habeen hore, balse, lama shaa cinin waxa sababay dhimashadiisa.
Twitterkeeda waxay ku sheegtay inay ku adag thaay inay hesho erayo ay ku had asho, iyadoo uu qalbigeeda buuxiyey xus uusta walaalkeeda.
Tony Rodham oo 65 jir ahaa waxa uu ka tegay xaas iyo 3 carruur ah, waxa uu soo qabtay hawlo badan, waxa uu soo dhigtay Kolejka Wesleyan iyo Jamaacad da The University of Arkansas, balse mar naba kama qalin jebinin.
Waxa uu so oqabtay shaqooyin kala duwan, waxa uu soo noqday Ilaaliye Xa bsi, Iibiye Caymiska, Maalgashi Ganacsi iyo bare khaas ahaa.
Tony Rodham waxa uu la soo shaq eeya Guddiga Qarnka Dimuqradaiga mud dadii Doorashadii Madaxtinimadda Mara ykanka ee sannadkii 1992kii, wuxuuna markii noqday Lataliye sannadihii 1990aadkii,
Hillary Rodham walaalkeeda waxaa so owajahay dhowr su’aalood oo ku aadan Xiriirka uu la lahee Aqalka Cda iyo Iskuda ygiisii Awoodeed ee u dhawaanshihiisa Madaxweyne Bill Clinton ee Mashaariicda Ganacsiga iyo Nolosha Shaqsiyadeed.
Kdaib, markii Bill Clinton loo doortay Mada xweynaha dalkaasi, waxa uu Tony Ro dham ka shaqeynayey oo uu ahaa Aba abulka goobta ee Guddiga Qaranka ee Di muqraadiga, xitaa markii uu guursaday Nikole Bokser oo ay dhashay Senator Bar bar Bokser, taasi oo ay wax yar kadib isfureen.
BOOLISKA KENYA OO QABTAY KAYD WEYN OO WAXYAABAHA QARXA OO LOO GUDBIN LAHAA NAIROBI
Boliska Degmadda Bomet ee dalkaasi waxay sheegeen inay dabagal ku hayeen, isla markaana ay qa bteen Hebeenkii Jim caha ayad gaari xamuul oo ay ku raran yihiin shixnad isugu jirtay maadooyinka laga farsameeyo waxyaabaha qarxa iyo qalabka loo adeegsado qarxintooda, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Wargeyska The Nation ee ka soo baxa Nayirobi waxa uu ka soo xigtay haw eeneyda ka ah Taliyaha Boliska degma dda Bomet, Naomi Ichami inay gaariga xa muulka ku qabteen Deegaanka Kyogong oo dhowr KM u jirta Degmadda Bomet, isla markaana uu waday 1,750 Kiilogaram ee maadada loo adeegs ado Bacriminta Beeraha ee Ammoniun Nitrate iyo 50 qal abka loo adeegsado Qarxinta, waa sida uu hada lka u dhigay.
Boliska waxay kaloo sheegeen inay xireen Dareewalkii waday gaarigaasi oo lagu magacaabo Joseph Wang’ombe oo 37jir, kaasi oo la filayo in maalinta Isniinta ee berrito la soo maxkamadeeyo
Gaariga lagu qabtay shixnadaasi ayaa la sheegay inay leedahay Shirkad lagu ma gacaabo Nitro Chemicals, oo ay Boliska baadigoobayeen Milkiilayaasha leh Shirkadaasi.
Boliska waxay tuhunsan yihiin in maa dada Kiimikada la qabtay oo laga far samayn karo waxyaabaha qarxa la doo nayey in loo gudbiyo magaalladda Na yrobi, si loogu adeegsado Weerar Qara xyo ah, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Qabashada Kiimikadaasi oo la shee gay inay ahayd tii ugu ballarnayd ee mud dooyinka la qabto, waxay ku soo aaday hal isbuuc kadib, markii ay Nabadsugidda Kenya gacanta ku dhigeen Nin lagu ma gacaano Adan Galhai, laguna naana yso Urisha Galhay oo 22jir, kaasi oo lagu tuhunsan yahay inuu qorsheynayey inuu dilo Madaxweynaha dalkaasi, Uhuru Kenyatta.
Afhayeenka Boliska Kenya, Charles Owino ayaa sehegay inay Saraakiiasha Ammaanka fashiliyeen tiro badan oo we eraro la qorsheynayey, kadib, markii la he lay warbixino Sirdoon oo ay soo ururiyeen qeybaha kala duwan ee Hay’addaha Am maanka.
Kenya waxaa horey uga dhacay wee raro lagu riiqmay, waxaana ugu darnaa weerarkii ay Ururka Alqaacida ku qaad een dhismaha Safaaradda Maraykanka ee ku taalla magaalladda Nairobi bishii Augsut 7dii ee sannadkii 1998dii, laguna dilay ilaa 213 qof.
WARARKII UGU DAMBEEYAY XIISADDA BELEDWEYNE
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay shee gay aan in qaar ka mid ah Waxgarad ka Magaalada ay bilaab een dadaallo ay ku do onayaan in ay kusoo Afjaraan Xiisadda xill igaan ka taagan gobolka ee ka dhalatay xilka qaadista Gudoomiyaha gobolka Hiir aan.
Qaar ka mid ah waxgaradka Magaa lada Beledweyne ayaa la kulmay Gudo omiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Dab ageed, waxaana ay ka codsadeen in uu xi lka wareejiyo Ama uu ka baxo xarunta gobolka wuuna diiday.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu waddaa in ay tag aan Magaalada Beledweyne si looga hor taggo dagaal ka dhasha xilka qaadista Dabageed.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa la sheegay in uu amar ku bixiyay in xoog lo oga saaro xarunta gobolka sidoo kalena la soo xiro Gudoomiye Yuusuf Dabageed Gudoomiyihii xilka laga qaaday.
Yuusuf Dabageed ayaa sheegay Shalay uu is difaaci doono hadii la isku dayo in la xiro, waxaana la sheegay in uu wato Ciid amo badan oo taageersan, islamarkaana ka soo horjeeda xilka qaadistiisa
MUWAADIN SOOMAALI OO KU EEDEYSNAA FAL KUFSI OO LAGA SOO MASAAFURIYEY
Yacquub Axmed oo 30jir ayaa la sheegay in laga soo masaafuriyey dalka Britain, kadib, markii iskuday horey loo soo masaafurin lahaa uu fashilmay bishii October ee sannadkii hore.
Eedeysanaha oo dhawaan loo gud biyey Xarunta dadka lagu hayo, ayaa wa xaa Garoonka Diyaaradaha ee Heathrow Airport ee London laga saaray Diyaaradda Shirkadda Turkish ee duullimaadkeedu ahaa Istanbul,waxaana dib loogu celin doonaa Muqdisho.
Afar Sarkaal oo aad u xooggaan kana socday Xafiiska Arrimaha Gu daha Britain ayaa la sheegay inay Yacquub Axmed ku wehliyeen masaaf urintiisa.
Dowladda Britain ayaa la rajeynayaa inay bixiso Kharajka Diyaarad sannadkii hore ku fashilantay in lagu masaafuriyo Eedeysanaha, kadib, markii ay Rakaabka la socday Diyaaradaasi ka hor yimaadeen Masaafu rintiisa.
Wargeyska Toddobaadlaha ee The Mailon Sunday ee ka soo baxa magaall adda London waxa uu Shalay qoray in Yacquub Ahmed iyo saddex nin oo kale ay sannadkii 2007dii kufsi u geysteen ga bar la sheegay inay xilligaasi 16jir ahayd.
Ilowareed ayaa u sheegay Warge yska The Mail on Sunday in mid ka mid ah Eedeysanayaasha kufsiga geystay oo lagu magacaabo Cadnaan Maxamed oo Somali ah oo horey loo diiday Codsigiisa Magangelyodoonka sannadkii 2002kii inuu haatan ku xiran yahay Xarunta dadka lagu hayo, lana filayo in laga soo masaaf uriyo dalka Britain.
Saraakiisha Xafiiska Arrimaha Gud aha ee dalka Britain waxay kaloo ka feker ayaanin mid kale oo ka mid ah Eedeysa nayaasha u xiran falka Kufsiga oo lagu magacaabo Cadnaan Baaruud lagala laa bto Dhalashadda Britishka, si loo awoodo Inla masaafuriyo.
Eedeysnaaha 4aad oo la oran jirey Ondogo Axmed oo horey 8 sanno ku mu teystay falka Kufsiga, waxa uu ku biiray Kooxda Daacishta ka dagaalanta dalka Syria, waxaana la rum eysan yahay in lagu dilay Dagaal ka dhacay dalkaasi.
MADAXWEYNE KUXIGEENKA PUNTLAND OO GAARAY MAGAALADA BOOSAASO
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland, Ahna Kusimaha Madaxwe ynaha Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa safar shaqo oo gaaban ku gaaray magaalada Boosaaso, waxaana xarunta ganacs iga Puntland kusoo dhoweeyey maamulka go bolka Bari, kan degmada Boosaaso, Wa siirka Amniga Puntland iyo masuuliyiin kale.
Madaxweyne Kuxigeenka iyo waftiga la socdey oo xilli habeenimo ah ka ambab axay Magaalada Garoowe ayaa sii maray degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobo lada Nugaal, Karkaar iyo Bari.
Kusima Madaxweynaha Puntland, Ahna Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo qasriga Madaxtooyada Boosaaso ku hadlay ayaa ugu horayn u mahadceliyey masuuliyiintii gobolka ku soo dhoweeyay.
Madaxweyne Kuxigeenka ayaa shee gay in safarkiisu uu ahaa mid shaqo oo gaaban, sidoo kale waxa uu xusay inuu ku faraxsan yahay safarka shaqo ee uu ku soo gaaray gobolka Bari, gaar ahaan ma gaalada Boosaaso oo nasiib u yeelatay inuu kusoo gaaro socdaalkiisii ugu horeey ey tan iyo doorashadii kadib. Madaxwey ne Karaash waxaa uu tilmaamay in uu saf aro shaqo oo kale ku imaandoono gobolka.
Ugu dambayn, Madaxweyne Kuxige enka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cis maan Karaash ayaa inta uu joogo gobolka Bari shaqooyin muhiima ka qabandoona gobolka, waxaana uu kulamo muhiima la qaadandoonaa laamaha ammaanka, wax garadka iyo shacab weynaha gobolka.
MAAMULKA GOBOLKA BANAADIR IYO SARA AKIISHA CIIDAMADA OO KA WADA HADLAY AMNIGA MAGAALADA MUQDISHO
Kulan looga hadlayay sidii loo dardar galin lahaa wax ka qabashada nabadgalyada magaalada Muqdisho ayaa xarun ta gobolka Banaadir waxaa ku yeeshay maamulka gobolka iyo saraakiisha ciida mada.
Kulanka oo uu shir guddoomiyay Du qa Muqdisho Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisoow ayaa goob joog ka ahaa taliyaha ciidamada Booliiska Sooma aliyeed Gen Bashiir Cabdi Maxamed iyo qaar kale oo ka mid ah saraakiisha cii damada.
Shirka ayaa waxaa intiisa badan diira da lagu saaray dardargelinta sugida Amn iga, Isdhexgalka bulshada, Deriseynta iyo horumarka Caas imadda Muqdisho.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ah na Duqa Muqdisho Eng Cab diraxmaan Yariisow ayaa kula dardaarmay Saraaki isha ciidamada in la daradargeliyo Sugida Amniga Caasimadda, xilli mararka qaar ay ka dhacaan falal amnidarro.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa siweyn loo adkeeyay iyadoo ay yaraadeen qaraxyadii inta badan ka dhici jiray, kaddib markii la xadiday isku socodka magaal ada.
MUWAADIN U DOODDA XUQUUQDA DUUR JOOGTA OO KA DAYRINAYA
DABAR GOYNTA LAGU HAYO XAWAYAANKA SOOMAALIDA
Cabdi Cali Gadhle oo ah muwadin ilaa liya duur joogta Soma liland, ayaa sheegay in sideed Hareemocad (Leop ard) ay si ho ose u iibisay wasaarada deegaanka iyo horumarinta reer Miy iga,taas oo dhowaan la doonayo in dalka laga dhoofiyo.
Sideedan Hareemo cad oo hore loo ga reebay dad iibsanayey ayaa shirkadan ka baayac mus htaraysa xayawaanka oo wadamada nidaa mkoodu jilicsada san yahay si khiyaamo ah uga dhoofisa waxay dhowaan imanaysa dalka si ay u dhoofisoHaramo cadkaasi si ay uga iibiyaan goobaha xayawaanada lagu hayo.
Cabdi Cali ayaa sheegay inuu khaati ka taagan yahay Carabta dalka u yimaada inay cun aan shimbaraha waaweyn ee So maliland caan ku tahay, waxaanu xusay inay garab siinayaan siya asiyiin ay ku jir aan rag wasiiro hore soo maray iyo od ayaal madax dhaqameed ah oo ku xidhan Carabtaasi, kuwaas oo cidhib tiraya duurjooga.
"Maalin walba waxaanu isku haysana duur joogta Carab rag waaweyn oo wad anka caan ka ahi ka iibinayaan, laba jeer madaxweynaha Somaliland ayaan uga mhad naqayaa oo anigoo hor taagan oo is haysana uu ogaaday oo uu labadaasi jeer ba wax ka qabtay, mar waxay ahayd Carab dilay shimbiro waaweyn ee soom aalidu u taqaanjugley (Kori Bustard), wax aana isoo sheegay dadka deegaanka, markii aan dul tagay waxa isku qabsanay wasiir Carabta la socda, anago sidii isku haysana si uu madaxweynuhu ku oga aday mooyee waxa noo yimid gaadhi ciidan ah oo dhamaan Carabtii iyo dadkii caawinayey ba xidhxidhay, ka dibna Carabtii la mustaafuriyey”ayuu yidhi Cabdi Cali.
Mar kale isagoo ka hadlaya Carab ay isku qabsadeen iyagoo ugaadhsanaya shimbiraha waxa uu yidhi " maalin kale Carab diyaarad wadatay oo madaarka ka soo degtay oo aad u faro badan baa doo naysay inay shimbiro badan qaataan, mar kii la isoo sheegay waxaan tagay halkii ay joogeen, waxa waday safiirkii hore Imaar aadka ee dhowaanta la bedelay, anagoo sidii isku haysana waxa noo yimid Badha saabka gobolka Saaxil oo madaxweynuhu amar soo faray in aan xawaanka duur joo gta ah aanay Carabtasi dili Karin balse dal xiisi karaan dhulka, ka dibna sidii bay Car abtii ku noqotay, labadaasi jeer madax wey naha isoo gurmaday anigoo is hor fadhinna”.
Cabdi Cali waxa la shaqeeya dadka deegaanka oo telefoo nadiisa haya si ay ugu soo sheegeen wixii Ajanabi guranayo, taas ayaa keentay inuu mar walba kor meer ku maro deegaanno kala duwan.
"Xeerka Somaliland wuxu sheegayaa in Mulluca xayawaanka illaa ka ugu weyn aan dalka laga dhoofi Karin, sidaas dart eed, waxaan madaxweynaha u sheegaya in sideedda Hareemo cad ee la dhoofin ayo ee lagugu sheegay in lagu daryeelayo Koonfur Afrika oo lagu xanaanaynayo in aanay waxba ka jirin ee la kala iibsaday, koonfur Afrika lafteedu ma ogola in Hare emo cad aan kooga ahayn u yimaado maadaama oo koogii ka dhaqan bedelm ayo marka uu tago hareema cad dal kale laga keeany, marka madaxweynaha wax ba kama jiraan in halkaasi lagu xanaan eenayo ee shirkadaha iibsanaya ee wax aan ka doonaya inaad joojiso oo sideedda Hareemo cad ee wasaarada deegaanka jooga aanad ogolaan in la dhoofiyo”.
Cabdi Cali waa nin sita dhalashada Maraykanka, waxaana ku xidhan dalxii sayaasha reer galbeedka, kuwaas oo uu daawadsiiyo dugaaga dalka jooga, waxa anu wax ka qoray xawayaanka kala duw an ee ku nool geeska Afrika
DOWLAD DEEGAANKA OO YEELANAYA KALA BAR DAKHLIGA KA SOO XAROODA SHIDAALKA DHULKIISA LAGA SOO SAARO
Aqalka sare ee Baarlamaanka Itoob iya ayaa meel mariyay xeer qabyo ah, kaa soo qeexaya inta uu la'eg yahay Saamiga uu dowlad deegaanka yeelanayo,kaddib markii shidaal laga helay deegaanka Hala quraan.
Sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha sharciga oo ay soo diyaarisay Wasaarada Batroolka Itoobiya oo uu meel mariyay Baralamaanka dalkaasi ayaa muujinaya in dowlad deegaanka Sooma alida uu yeelanayo 50% dakhliga ka soo xarooda shidaalka dhulkiisa laga soo sa aro.Inta soo hartay 25% waxaa iskaleh dowladda federalka Itoobiya, halka 25% loo qeybinayo gobollada kale ee Itoobiya.
Gaaska laga helay Ismaamulka Soomaa lida oo gaaraya 1.6 Trillion Cubic Feet, ay aa waxaa ogaatay African Global Energy Ltd oo ah shirkad ka shaqeysa dhinaca Ta marta oo laga leeya hay dalka Ingiriiska.
Qorshahan wax aa ka soo shaqeeyay Golaha Federaalka Ito obiya, waxaana gob olka Soomaalida ku metala Mustafa Max amed Cumar, madaxweyn aha deegaan ka, Aadan Faarax, ku xigeenkiisa, Cabdi Maxamed, afhayeenka baarlamaanka, Mu bashar Dubad Raage, wasiirka Maaliya dda, Rashiid Xaaji, gudo omiye ku xigeen ka Aqalka Sare Itoobiya iyo Eng Maxa med Sha ale, madaxa xarunta dhexe ee xisbiga deegaanka ka arrimiya.
Arrintan ayaa meesha ka saareysa hadal heyn muddoo yinkan Warbaahinta ay qoreysay, taasoo la xiriirtay in 5% uu do wlad deegaanka Soomaalida ku yeel anyo shidaalka laga helay dhulkiisa, iya doo warkaasna la sheegayay in laga soo xigtay Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiye Axmed.
TALIYE CIIDAN OO LAGU DILAY QARAX KA DHACAY XUDEYDAH
Taliyihii Guutada 3aad ee dalka Yem en, Cali Axmed Qatmul iyo 4 ka mid ah Ilaaladiisa Khaaska ayaa lagu dilay qarax lala be egsaday gaarigii ay la socdeen oo marayey Degmadda Khokha ee duleedka magaalada dekedda leh ee Xudeydah.
Sarkaal Milliteri oo la hadlay wakaalladda Wararka Shiinaha ayaa sheegay inuu Taliyahaasi qaraxu qabsaday, xilli uu doona yey inuu soo kormeero fariisimadda ay Ciiddanka taabac san Dowladda Yemen ka joogaan magaalada Xudeydah ee kaab iga ku haysa Badda Cas.
Dhinaca kale, Maleeshiyadda Xuutiyiinta ayaa la sheegay in ay madaafiic cuculus ku garaaceen Fariisimadda Ciiddankaasi ku lahaayeen Degmooyinka Tuxyata, Durayhami iyo Hays ee